Double-rafitra solosaina fisaka knitting milina - China Taizhou Boding milina
Computer knitting milina fisaka
Shoes ambony milina fanaovana vamp
Double-rafitra solosaina knitting milina fisaka
DZ252S dia 52 santimetatra amin'ny rafitra tokana tokana kalesy roa-roller, devicde amin'ny niakatra-toerana hitsena ny fihenjanana-roller takiana ho an'ny ampahany knitting .Equipped amin'ny rafitra fanairana infrared vao hita, tsy mety tsara ny fanairana sy fanjaitra tsy ampy hira. Izany deviced amin'ny fandaharana marani-tsaina sy ny infrared sensor knitting ihany no mamantatra ny faritra mba tsy ny Miss manaitra tokoa. Mialà mpiara-nofehezin'ny hanitsaka maotera, hampitombo ny hafainganam-pandeha sy ny kalesy miverina vokatra ary koa tsy ny efa tonta ny ...
DZ252S dia 52 santimetatra amin'ny rafitra tokana tokana kalesy roa-roller, devicde amin'ny niakatra-toerana hitsena ny fihenjanana-roller takiana ho an'ny ampahany knitting .Equipped amin'ny rafitra fanairana infrared vao hita, tsy mety tsara ny fanairana sy fanjaitra tsy ampy hira. Izany deviced amin'ny fandaharana marani-tsaina sy ny infrared sensor knitting ihany no mamantatra ny faritra mba tsy ny Miss manaitra tokoa. Mialà mpiara-nofehezin'ny hanitsaka maotera, hampitombo ny hafainganam-pandeha sy ny kalesy miverina vokatra ary koa tsy ny efa tonta ny kalesy lalamby.
Amin'ny teknolojia nomerika, hanatanteraka lamina ny famindrana, pointel, tuck, intarsia, jacquard, avo roa heny jersery lemaka, toa miafina endrika endrika tsy tapaka sy ny fomba fiasan'ny knitting. Raiki-pitia fototra tokana na roa sosona Jersey, tsy ara-dalàna maro-loko jacquard, intarsia, tariby, pointel lamba. Mety ny landy, simika fibre, volon'ondry, acrlic fibre, mifangaro kofehy, landihazo kofehy ho raiki-pitia ny akanjo ba, vozony, placket, hem, Cuff, folara, paosy, pataloha, sy ny lamba knitting.
hijerena 5 / 7G 7G 9G 10G 12G 14G 16G
Fanjaitra / Width 364needles / 52inches 364needles / 52inches 468needles / 52inches 520needles / 52inches 624needle / 52inches 728needles / 52inches 832needles / 52inches
Main Function Raiki-pitia fototra tokana na roa sosona Jersey, tsy ara-dalàna maro-loko, jacquard, intarsia, tariby, pointel lamba tsara ny landy, simika fibre, volon'ondry acrylic fibre, mifangaro kofehy, landihazo kofehy ho raiki-pitia ny akanjo ba, vozony, placket, hem, Cuff, folara , paosy, pataloha, ary, hafa knitting lamba.
knitting System Single kalesy rafitra roa na telo rafitra, miaraka amin'ny teknolojia nomerika, hanatanteraka lamina ny famindrana, pointel, tuck, intarsia, jacquard, avo roa heny jersery lemaka, appaent endrika, miafina endrika sy ny hafa tsy tapaka fomba fiasan'ny knitting.
knitting Speed Max knitting haingana 1.6M / S. 32 hafainganam-pandeha fizarana nofehezin'ny servo maotera.
Sitch Density 64 hakitroky safidy isan-karazany 0-650 nofehezin'ny hanitsaka maotera, herinaratra tsara hanitsy ny teknolojia.
Dynamic stitch Deviced ny mavitrika stitch teknolojia, hahatratra ny zaitra eo amin'ny iray isan-karazany ary mazava ho azy isan-karazany ao anatin'ny iray hakitroky Mazava ho azy mba hanatsarana kniing efficency sy ny isan-karazany.
taolan-tehezana famindrana Free transter fomba roa eo aloha sy amin'ny eedle indray koa ary tsy misy mahasakana ny kalesy hetsika. Ary raiki-pitia hamindra tsirairay.
Sinker Rehefa niroso moto fanaraha-maso ny Adjustable sinker mba hahazoana ny maro ny asa famolavolana sy nihalehibe.
Mpitovo na Double Rackings Motor fiara tsaina anao koa anefa, hanatratra 1/2 na 1/4 fanjaitra tsaina anao koa anefa na oviana na toerana. Double acking Max 2,5 santimetatra lafiny iray, ary roa lafiny Max 5 santimetatra, deviced tamin'ny 5G, 7G, ary 5 / 7G milina. Single tsaina anao koa anefa i Max 2inches, deviced tamin'ny 9G, 12G, 14G, ary 16G milina.
High Speed ​​Miverena Mialà joine nofehezin'ny hanitsaka maotera, hampitombo ny hafainganam-pandeha sy ny kalesy miverina productiviy ary koa tsy ny efa tonta ny kalesy lalamby.
Roller Device DZ252S deviced amin'ny hampidina tohotra sy ny-toerana-roller, DZ252S deviced amin'ny niakatra-toerana oller; 24sections ny mandeha ho azy amin'ny fanaraha-maso Subsection fanitsiana .Fulfil tonga lafatra Tack teo ny lamba sy ny fihenjanana takina amin'ny portionable knitting.
kofehy Roller Kofehy tsara indrindra-roller mifehy Te fihenjanana ny kofehy mba gurantee ny lamba tsara.
kofehy Carrier 2 * 8 kofehy mitondra deviced tamin'ny 4 lafiny roa mitarika lalamby.
Safety Full milina rakotra mba hampihenana ny noice doka vovoka. Cover sensor, maika bokotra, ny hery sy ny fitaovana eny mpanondro ny miantoka ny fiarovana.
Auto Stop Machine fiara kofehy fijanonana rehefa fiatoana, mpiray niraikitra kofehy, lamba horonan-taratasy tao anatiny, fanjaitra hira, be loatra, fandaharana fahadisoana sy fandaharana nitranga farany.
Needle Detector Fitaovana amin'ny rafitra fanairana infrared vao hita, tsy mety tsara ny fanairana sy fanjaitra tsy ampy hira.
Computer System LCD Monitor, mikasika efijery, tsary ny interface tsara, USB sy ny harato imput, 1GB RAM ho an'ny lehibe rakitra fitehirizana.Manara-maso: Miasa tahirin-kevitra, tahirin-kevitra stitch Optical sy Adjustable nandritra ny famokarana ho an'ny fandidiana mety.
Program rafitra sy ny milina rafitra solosaina mora ny vaovao farany sy hanohana CNT / HCD / OOO fomba rakitra.
Rafitra maro asa dia ahitana ny teny Sinoa, Anglisy ary teny hafa.
File dreninao USB sy ny harato
Power Off Memory Deviced CMOS mandroso ny teknolojia, rehefa hitranga ny fahefana eny knitting tahirin-kevitra sy rakitra dia voavonjy noho ny Restart knitting.
Net Connection Hafainganam-pandeha avo (ETHERNET), 254 milina mifandray indrindra ho rakitra torohevitra mba hanatanteraka monior sy ny fizarana rakitra.
lafiny (Double rafitra) * L * W H 2915 * 940 * 2010mm, (telo rafitra) * L * W H3015 * 940 * 2010mm
Previous: Single-rafitra solosaina knitting milina fisaka
Next: Rafitra telo-kiraro milina fanaovana vamp ambony
6f 144n ordinatera Sock Setting Machine
Auto Flat raiki-pitia Machine
Auto Voditongotra Ambony-Mamatotra Machine
Automatic miray volo Glove knitting Machine
Backpart koronosy Machine
Cheap Price Machine Fa Home Use
Vozon'akanjoko Making Machine
Computer maso knitting Machine
Computer Flat raiki-pitia Machine Amin'ny Sinker
Computer Flat knitting Machine Fa Wholesale
ordinatera Flat Bed knitting Machine
ordinatera Scarf Flat raiki-pitia Machine
Ordinatera Weaving Machines
Varingarin'i Die nanapaka Press Machine
Lamba Fa Sweater Making Machine
Flat raiki-pitia Machine Amin'ny Sinker
Flat knitting Machine Fa Textile Industry
Flat knitting Machine Amin'ny Tsara ny tolotra
tanteraka Jacquard Flat Bed knitting Machine
tanteraka Jacquard Flat raiki-pitia Machine
tanteraka knitting Machine
tsara Quality Sweater Computer knitting Machine
Hat Ny fanaovantsika Machine
Home ordinatera knitting Machines
Nisaron-tava Sweater Making Machine
Industrial Glove Manao Machine
Mamatotra Insole Machine
Machine Fa Slipper Upper
Men Sweater Polo Manao Machine
Multi Gaug y Industrial Flat raiki-pitia Machine
Mahery Hat Machine
Single kalesy Double System
andilany knitting Machine
Sweater Men Ny fanaovana Machine
Pirinty natao tamin'ny T Shirt Machine
Upper mifandray Machine
Ambony soson'ny mifandray Machine
Wool Scarf Ny fanaovantsika Machine
Eny Computer knitting Machine
Single-rafitra solosaina knitting milina fisaka
Dingzhen ordinatera Flat knitting Maky ...
Dingzhen ordinatera Jacquard Machine Fo ...
Dingzhen Single-System ordinatera Flat ...